Ukuhunyushwa Kwemishini Yezizathu Ezi-3 Akusondele Ekuhumusheni Komuntu | Martech Zone
Ukuhunyushwa Kwemishini Yezizathu Ezi-3 Akusondele Ekuhumusheni Komuntu
NgoLwesibili, ngoJulayi 21, i-2015 NgoMsombuluko, Julayi 20, 2015 Douglas Karr
Eminyakeni edlule, ngikhumbula wonke amasayithi afaka lezo zinkinobho zokuhumusha ezenzakalelayo. Ungachofoza inkinobho kusayithi okungelona elesiNgisi futhi bekungafundeki kangako. Isivivinyo esihle kakhulu bekungukuhumusha isigaba sisuselwe esiNgisini siye kolunye ulimi… bese sibuyela esiNgisini ukubona ukuthi umphumela wehluke kangakanani.
Isibonelo, uma ngihumusha isigaba sokuqala sisuka esiNgisini siye eSpanishi bese ngibuyele emuva ngisebenzisa ukuhumusha nge-Google, nansi imiphumela:
Eminyakeni edlule, ngikhumbula zonke lezo zingosi zezinkinobho kufaka phakathi ukuhunyushwa komshini okwesabekayo. Uchofoza inkinobho kusayithi okungelona elesiNgisi futhi bekungacaci kalula. Ubufakazi obedlula bonke kwaba ukuhumusha isigaba sisuselwa esiNgisini siye kolunye ulimi… bese sibuyela esiNgisini ukubona ukuthi umphumela wehluke kangakanani.
Ngesinyathelo esisodwa esilula, ungabona isinqamu sokunemba ne-verbiage ebushelelezi elahlekile. Ukulinganiselwa kwe- ukuhumusha ngomshini ziyefana njengoba zineminyaka. Ukuhumusha komshini akunakho umongo, ikhono lokunqoba ukungaqondakali, nokuntuleka kwe- Okuhlangenwe nakho. The umshini ayifundisiwe ngeminyaka engama-20 + emkhakheni othile noma esihlokweni esivele ngokuhamba kwesikhathi. Amagama awahunyushwa kalula, ahunyushwa ngokususelwa esihlokweni nakokuhlangenwe nakho kombhali nomfundi.
Vele, umhumushi ongumuntu ngeke angene ephaketheni lakho, futhi kungenzeka bangakwazi njalo ukuhamba nawe ukuya kuleyo ndawo yokudlela yaseThai eyiqiniso noma eholidini lwaphesheya kwezilwandle, ngakho-ke nakhu esikuncomayo: Uma udinga imiphumela esheshayo, futhi abayitholi ' Akumele kube okuphelele, kulungile ukusebenzisa i-Google Translate. Kunoma yiluphi uhlobo lwebhizinisi noma imibhalo yezentengiselwano, noma yini okufanele inembile, kungcono ukunamathela kubahumushi abangabantu.
Nakhu ukuhlolwa kwekhanda nekhanda kusuka ku- I-Verbalink enikeza okutholakele kanye nezindlela ezinhle kakhulu zokwenza Ukuhumusha komshini kuqhathaniswa nokuhumusha komuntu.
Tags: ukuhumusha nge-Googleukuhumusha kwe-googleukuhumusha komuntuukuhumusha ngomshiniukukhuluma
Mar 7, 2016 ku-8: 14 AM
Kuyathakazelisa futhi kuyahlekisa !!!! Ngicabanga ukuthi umshini awusoze wamshaya umuntu !!